Dနေမင်း(နည်းပညာ): ♪ အသုံးဝင် Tools ပေါင်း 14 မျိူးပါဝင်တဲ့ - Glary Utilities Professional Edition v5.17.0.30 + Serial ♫
♪ အသုံးဝင် Tools ပေါင်း 14 မျိူးပါဝင်တဲ့ - Glary Utilities Professional Edition v5.17.0.30 + Serial ♫
ကွန်ပြူတာကို Maintenance လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အသုံးဝင် Tools ပေါင်း 14 မျိူးပါဝင်တဲ့ Glary Utilities Pro ဆိုတဲ့ Software လေးတစ်ခုမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ Computer မှာမလို လားအပ်တဲ့ System Error တွေ Register Error အပါအ၀င် အခြားတော့ Error တွေကိုလည်း Clean လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ Registry Error တွေကို Clean လုပ်ပေးနိုင်ပြီး System Performance ကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကွန်ပြူတာနဲ့ မိမိရဲ့ အချက်အ လက်တွေကိုခိုးယူနိုင်တဲ့ Spyware နဲ့ Trojan တွေကိုလည်း ရပ်တန့်ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ Repair လည်း လုပ်ပေးနိုင် ပါတယ်ဗျာ။ ပြီးတော့ Disk Cleaner လည်း လုပ်ပေးနိုင် ပါတယ်ဗျာ။ ဘယ်လို Disk Cleaner ဆိုတာကတော့ Hard Disk ထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ ဖျက်လိုက်တဲ့ Data တွေဟာ တခါတရံမှာအကုန်လုံး မပျက်သွားတက်ပါဘူး။ Shortcut အနေနဲ့ ကျန်တက် ပါတယ်။ Uninstall လုပ်တဲ့ Software တွေကလည်း။ အကုန်မပျက်တဲ့ Software တွေရှိတက်ပါတယ်။ အဲဒါတွေက များလာ တဲ့အခါမှာ Hard Disk မှာနေရာ လွတ်တွေ မကျန်တက်ပါဘူး။ အဲဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးနဲ့ Clean လုပ်ပေး လိုက်တယ်ဆိုရင် နေရာလွတ်တွေ ရလာနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ Uninstall ဆိုတဲ့ Function လည်းပါဝင်ပါ တယ်။ Add or Remove Program နဲ့ Remove လုပ်လို့မရတဲ့ Software တွေကို Glary Utilities Pro နဲ့ Uninstall လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အခြားသော Features များစွာပါဝင်ပါသေးတယ်။ အသေးစိတ်ကိုတော့အောက် မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ Full Version အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်အောင် Serial Key ကိုပါထည့်ပေးထားပါတယ်ဗျာ။ ဒါ့အပြင် Portable အနေနဲ့အသုံးပြုနိုင် ဖို့အတွက် Portable Version ကိုပါထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
** Step-1.အောက်က Download Button ကိုနှိပ်စရာမလို
** Step-2. "5sec". လောက်စောင့် စရာမလို
** Step-3. " << SKIP AD >> ".ကိုနှိပ် စရာမလို
Posted by Thu Rein at 3:34 AM